“လူတှကေ သူမြားကို သာ ဆဲတတျကွတာ သူတို့ကို ပွနျပွောရငျ အသညျးခိုကျအောငျ နာတတျကွတယျ ” လို့ ပေါကျကှဲပွောဆိုလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျ ခွူးလေး.. – Maythadin
ပရိတျသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြောလေး ခွူးလေးကတော့ ဟနျဆောငျမှု ကငျးကငျးနဲ့ ပြျောပြျောနတေတျသူလေးဖွဈပွီး အောငျမွငျမှုရရှိနတေဲ့ မငျးသမီးခြောလေးပါ။
ခွူးလေးဟာ MRTV-4 ဇာတျလမျးတှဲလေးတှနေဲ့ လူသိမြားအောငျမွငျလာခဲ့သူဖွဈပွီး အခုနောကျပိုငျးမှာဆိုရငျ ကွျောငွာတှအေပွငျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှပေါ ရိုကျကူးလာရတာဖွဈပါတယျ။
ခွူးလေးက အခုလိုအောငျမွငျမှုတှရေရှိလာအောငျအောကျခွကေနကွေိုးစားရုနျးကနျခဲ့ရတဲ့သူလေးဖွဈပွီး ဒီနမှေ့ာ တော့ သူမရဲ့ Facebook စာမကျြနှာမှာ ပေါကျကှဲ သံစဉျလေးတှေ ရေးသားပွီး တငျလိုကျ တာပါ။
“ဟယျ လူလို စကားကောငျးကောငျးလေးဘဲပွောတာပါဟယျ ဘုရားရေ သူ့ကို လူလို ရှငျးပွတယျ ဆိုတာကလညျး လူလိုပွောရငျ လူလို နားလညျလိမျ့မယျ ဦးနှောကျရှိလိမျ့မယျလို့ အထငျကွီး မိလိုကျလို့ပါ
လူကဲခတျညံ့သှားတယျ sorry ပါ ဘာရေးလညျးဆိုတာ ရေးထားတဲ့အရေးသားက ရိုငျးလားဆိုတာ သိခငျြရငျ တော့ ပွောကွပါ. စာက ရှိပါသေးတယျ ပွပါ့မယျရှငျ
လူတိုငျးကိုလညျး လိုကျရှငျးမပွခငျြသလို ဘာမှ လညျးမလိုအပျဘူးလေ ရှငျးပွတော့ကော ဘာဖွဈလာမှာမို့လို့လဲ ကိုယျ့မိသားစုတှေ သူနဲ့ fri တှဖွေဈနလေို့ မကောငျးလို့ ရှငျးပွပေးလိုကျတာပါရှငျ
So So Sorry ပါ အမရယျ ကြှနျမ ခနျြဖူးတှကေိုတော့ မစျောကားပါနဲ့ သူတို့က ကြှနျမဘာလုပျနလေဲ ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတာ အကုနျသိထားတဲ့ သူတှမေို့လို့ပါ
ခနျြဖူးတှလေညျး အမကို ဘယျလိုဘဲ ထငျကွေးတှနေဲ့ ဆဲနပေါစေ စိတျတိုပွီး ပွနျမပွောကွပါနဲ့.လူတှကေ သူမြားကို သာ ဆဲတတျကွတာ သူတို့ကို ပွနျပွောရငျ အသညျးခိုကျအောငျ နာတတျကွတယျ” ဆိုပွီး ပေါကျကှဲထှကျလာတဲ့ စာသားတှေ ရေးတငျခဲ့ တာပါ။ ကဲ ဘယျသူ့ကို ဆိုတာ ပရိသတျကွီး သိရငျ ပွောပွခဲ့အုံးနျော
“လူတွေက သူများကို သာ ဆဲတတ်ကြတာ သူတို့ကို ပြန်ပြောရင် အသည်းခိုက်အောင် နာတတ်ကြတယ် ” လို့ ပေါက်ကွဲပြောဆိုလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ခြူးလေး..
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး ခြူးလေးကတော့ ဟန်ဆောင်မှု ကင်းကင်းနဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်သူလေးဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေးပါ။
ခြူးလေးဟာ MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေနဲ့ လူသိများအောင်မြင်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ကြော်ငြာတွေအပြင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေပါ ရိုက်ကူးလာရတာဖြစ်ပါတယ်။
ခြူးလေးက အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာအောင်အောက်ခြေကနေကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့သူလေးဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာ တော့ သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ပေါက်ကွဲ သံစဉ်လေးတွေ ရေးသားပြီး တင်လိုက် တာပါ။
“ဟယ် လူလို စကားကောင်းကောင်းလေးဘဲပြောတာပါဟယ် ဘုရားရေ သူ့ကို လူလို ရှင်းပြတယ် ဆိုတာကလည်း လူလိုပြောရင် လူလို နားလည်လိမ့်မယ် ဦးနှောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ အထင်ကြီး မိလိုက်လို့ပါ
လူကဲခတ်ညံ့သွားတယ် sorry ပါ ဘာရေးလည်းဆိုတာ ရေးထားတဲ့အရေးသားက ရိုင်းလားဆိုတာ သိချင်ရင် တော့ ပြောကြပါ. စာက ရှိပါသေးတယ် ပြပါ့မယ် ရှင်
လူတိုင်းကိုလည်း လိုက်ရှင်းမပြချင်သလို ဘာမှ လည်းမလိုအပ်ဘူးလေ ရှင်းပြတော့ကော ဘာဖြစ်လာမှာမို့လို့လဲ ကိုယ့်မိသားစုတွေ သူနဲ့ fri တွေဖြစ်နေလို့ မကောင်းလို့ ရှင်းပြပေးလိုက်တာပါရှင်
So So Sorry ပါ အမရယ် ကျွန်မ ချန်ဖူးတွေကိုတော့ မစော်ကားပါနဲ့ သူတို့က ကျွန်မ ဘာလုပ်နေလဲ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အကုန် သိထားတဲ့ သူတွေမို့လို့ပါ
ချန်ဖူးတွေလည်း အမကို ဘယ်လိုဘဲ ထင်ကြေးတွေနဲ့ ဆဲနေပါစေ စိတ်တိုပြီး ပြန်မပြောကြပါနဲ့.လူတွေက သူများကို သာ ဆဲတတ်ကြတာ သူတို့ကို ပြန်ပြောရင် အသည်းခိုက်အောင် နာတတ်ကြတယ်” ဆိုပြီး ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့ စာသားတွေ ရေးတင်ခဲ့ တာပါ။ ကဲ ဘယ်သူ့ကို ဆိုတာ ပရိသတ်ကြီး သိရင် ပြောပြခဲ့အုံးနော်